नेपाल आइडलका बिक्रम बराल र भ्वाइस अफ नेपालकी सम्झनाको गीत बजारमा – Khabar Silo
नेपाल आइडलका बिक्रम बराल र भ्वाइस अफ नेपालकी सम्झनाको गीत बजारमा
काठमाडौं । दोस्रो भ्वाइस अफ नेपालको ब्याटल राउण्डसम्म पुगेकी गायिका सम्झना पाण्डेले ‘ढाक्यो मायाले’को भिडियो सार्वजनिक गरेकी छिन् । जसमा गायिका पाण्डेलाई नेपाल आइडलबाट चर्चामा आएका गायक बिक्रम बरालले स्वरमा साथ दिएका छन् ।
भुपिन्द्र महतको शब्द शृजना रहेको गीतमा संगीतकार हरि लम्सालको संगीत रहेको छ ।
रोमान्टिक प्रेम कथालाई भिडियोमा निर्देशक शान थापाले उतारेका छन् । अर्जुन तिवारीको छायांकन रहेको गीतमा नकुल खड्काको सम्पादन रहेको छ । कोरियोग्राफी राजिव समिरले गरेका छन् ।
कृष्णको अनुहार किन हेर्न चाहन्नन् गोविन्दाकी पत्नी सुनीता ? खुलाइन् कारण
एजेन्सी । कृष्ण अभिषेक र उनका मामा गोविन्दा बिचको विवाद अझै साम्य भएको छैन । कृष्ण अभिषेक द कपिल शर्मा शो का कलाकार हुन् । जब पनि गोविन्दा कपिल शर्माको शो मा अतिथि को रूप मा आउँथे, कृष्ण शो बाट बिदा लिन्छन् । पछिल्लो समय पनि त्यस्तै भयो । गोबिन्दा आफ्नी पत्नी सुनीतासंगै कार्यक्रमा जाँदा […]
प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न : सरकारको नेतृत्व आधा-आधा गर्ने समझदारी थियो हैन? त्यो कहिलेबाट लागू हुन्छ?